ဈေးနှုန်း : တစ်ပတ်လျှင် ၅၂၅ ကျပ်
ကုမ္ပဏီ : Contents Hub Services
တောင်သူလက်စွဲသတင်းမိုဘိုင်းလ်ကွန်ယက်" တွင် စိုက်ပျိုးရေးသတင်းအချက်အလက်များအား တောင်သူဦး ကြီးများသိရှိစေရန် နှင့် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါသည်။ အကြောင်းအရာအား နေ့စဉ် (၁) ခုရရှိပါမည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၅၂၅ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း : Free Promotion
Contents Hub ၏ အကုန်သိ သတင်းဝန်ဆောင်မှုမှ လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သုတ၊ ရသ၊ သတင်း အဖြာဖြာအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရရှိမည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်အကြောင်းအရာ နှစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂.၉.၂၀၁၇) မှ (၆.၉.၂၀၁၇) အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုစယူသည့်အချိန်မှစ၍ ၁ ပတ်စာအခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခမဲ့ကာလပြီးဆုံးပါက တစ်လလျှင် ၁၅၇၅ ကျပ် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း : ၂၆၃ ကျပ် / ဗွီဒီယို
Celebrity Movies ဝန်ဆောင်မှုမှ အနုပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ ၊ လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုများ အစရှိသည့် Exclusive ဗွီဒီယိုဖိုင်များအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင်အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အကြောင်းအရာဗွီဒီယို ၅ ဖိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂါ နှင့် ကြာသပတေး နေ့များတွင် Video File ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဗွီဒီယို တစ်ဖိုင်လျှင် ၂၆၃ ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း : ၁၅၈ ကျပ် / ဗွီဒီယို
DIY (ဥာဏ်ကြီးရှင်) သင့်အိမ်မှာအသုံးမဝင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးလွှင့်ပစ်ထားတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဥပမာ-အအေးသောက်ပိုက်၊ စက္ကူစာရွက်၊ ကော်ဇွန်း) အဲ့ဒီလိုအသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအိမ်တွင်း၌ အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုပြန်လည်အလှဆင်နိုင်မလဲဆိုတာဗွီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူ ကြည့်ရူနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အကြောင်းအရာဗွီဒီယို (၃) ဖိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် - ၁၅၈ ကျပ်။ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
How To (သင်သိပါသလား)
ဈေးနှုန်း : ၁၅၈ ကျပ်​/ ဗွီဒီယို
ဘဝမှာနေ့ စဉ်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အဆိုးအကောင်း၊ အကျိုးအကြောင်း အခက်အခဲမှန်သမျှကို ဘယ်လိုအောင်မြင်စွာကျာ်ဖြတ်နိုင်မှာလဲ...? လွယ်ကူစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို ဗွီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်ကြည့်ရှုလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာ ၃ ဖိုင်ရရှိပါမည်။ တစ်နေ့လျှင် - ၁၅၈ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Contents Hub မှ ZOT Entertainment ၏ စိတ်ကြည်နူးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော ဟာသ၊ ရသများအား ရရှိပါမည်။ တစ်ပတ်လျှင် ဗွီဒီယို (၂) ဖိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂါ နှင့် စနေနေ့များတွင်သာ Video File ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဗွီဒီယိုတစ်ဖိုင်လျှင် ၂၁၀ ကျပ် ကျသင့်ပါမည် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး) အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း : တစ်ရက် - ၁၅၈ ကျပ်
ဘဝနေထိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လူနေမှုဘဝတွင်လိုအပ်သည့်ပျော်ရွှင် စရာနည်းလမ်းကောင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ၊ အချစ်ရေးအချစ်ရာအကြောင်းအရာများ၊ ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်သိမှတ်စရာများနှင့် ပညာရှိအဆိုအမိန့်များအစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်အကြောင်းအရာတစ်ခုရရှိပါမည်။ တစ်နေ့ လျှင် ၁၅၈ ကျပ်ကျသင့်ပါမည် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Money Talk (အောင်မြင်ကျော်ကြား သူတို့စကား) အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများရဲ့ အတွေ့ အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ ၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အကြံဥာဏ်များနှင့် ဗဟုသုတများကို ဆွေးနွေးပြောကြားထားသည့် ဗွီဒီယိုိုဖိုင်များအားကြည်ရှုရမည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အကြောင်းအရာ ဗွီဒီယို (၃) ဖိုင်ရရှိပါမည်။ တစ်နေ့လျှင် - ၂၁၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါဝင်ပြီး)။ အသေးစိတ်သိလိုပါက - 106 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) 09258539955 , 09258539966 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဈေးနှုန်း : 315Ks/Song/Month
MPT နှင့် Contents Hub တို့၏ Caller Ring Back Tone ၀န်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သော MyCRBT ၏ Ring Back Tone သီချင်းများအား ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ကြေး - ၁၀၅၀ ကျပ် ၊ တစ်လလျှင် သီချင်းတစ်ပုဒ် - ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Newest CRBT service is now available by MyCRBT powered by Contents Hub. Monthly Fee - 1050 Kyats , 315 Kyats / Song / Month